Home News Al-shabaab oo Baahisay Magaca Shaqsigii isku Qarxiyay Sayidka!!
Al-shabaab oo Baahisay Magaca Shaqsigii isku Qarxiyay Sayidka!!
Xarakada Al-shabaab ayaa soo bandhigtay Magaca iyo Qabiilka Ninkii isku qarxiyay weerarkii Isgoyska Sayidka ee Axaddii la soo dhaafay.
Ninka weerargaas geystay ayey Al-shabaab Magaciisa ku sheegeen Cali Xasan C/Raxmaan Khaalid kaas oo ka soo jeeda Beesha Boqol Hore ee degta Gobollada Baay iyo Bakool.
Idaacadda Al-shabaab ee Andalus ayaa waxaa ay baahisay wareysi ay ka qaadday Ninkaas ka hor inta uusan isqarxin,waxaana uu Wareysigaas kaga sheekeeyay sida uu u arko falka uu ku dhaqaaqayo.
Al-shabaab ayaa sidan oo kale dhowr jeer soo bandhigtay Magacyada iyo Qabiillada xubnaha ka tirsan ee fuliya weerarrada isqarxinta ah ama kuwa lagu galo Hoteellada iyo Xarumaha dowladda Federaalka ah.